ATI RADEON HD 2600 PRO ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်း DOWNLOAD - မောင်းသူ - 2019
ဂရပ်ဖစ်ကဒ် ATI Radeon HD 2600 Pro ကိုများအတွက်ယာဉ်မောင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး install
ကုမ္ပဏီ၏မြင့်လူကြိုက်များနှင့်အတူ PC ပေါ်မှာ Tele2 မိုဘိုင်းအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုများကိုအသုံးပြုသူသေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကအသုံးပြုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုအော်ပရေတာအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှကို USB-modem မူကွဲဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ၏အလုံအလောက်အင်တာနက်ကိုရသောအခါမှတည်ငြိမ်သော connection ကိုသေချာ။ ဒီနေ့ 3G နှင့် 4G devaysakh Tele2 အပေါ်ရရှိနိုင်သောရွေးချယ်စရာအကြောင်းကိုပြောပြပါ။
Tele2 modem configuration များ
default settings ကိုများသောအားဖြင့်အသုံးပြုသူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုမပါဘဲ default အ device ကိုပြနေကြသည်ကျနော်တို့က USB-modem setting များကိုရှိတယ်ဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ပေးအပ်ခြင်းခံရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ထိုသူအချို့တို့သည်ကွန်ယက်မှန်မှန်ကန်ကန်သောအာမခံချက်ကိုပယ်ဖျက်၎င်း၏တစ်ခုတည်းသောသမ္မာသတိအတွက်ပြောင်းလဲပစ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Option ကို 1: web-interface ကို
Tele2 သည့် router များနှင့်အတူတစ်ခုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်က Internet Explorer အတွက် Web-based interface ကိုတဆင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်ပါတယ်ကော်ပိုရိတ်-4G modem ကို အသုံးပြု. ၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်။ ကွဲပြားခြားနားသောဗားရှင်းမှာ EEPROM devices များအသှငျအပွငျ control panel ကိုကွဲပြားနိုင်ပေမယ့်အားလုံးကိစ္စများတွင်, အ parameters တွေကိုအချင်းချင်းတူညီကြသည်။
Tele2 Connect ကို USB-port ကိုဖို့ modem နှင့်ယာဉ်မောင်း၏ installation အဘို့အစောင့်ပါ။
တစ်ဘရောက်ဇာကိုဖွင့်ပါနှင့်လိပ်စာဘားထဲမှာယူထားတဲ့ IP ကို-လိပ်စာရိုက်ထည့်:192.168.8.1
လိုအပ်ချက်အရ, အထက်ညာဖက်ထောင့်မှာ့ dropdown ကနေတစ်ဆင့်ရုရှား interface ကိုဘာသာစကားထားကြ၏။
စတင်စာမျက်နှာတွင်, သင်က SIM ကဒ်ပေါ်တွင် PIN ကို-code ကိုသတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဒါဟာသင့်လျော်သော checkbox ကိုစစ်ဆေးနေခြင်းဖြင့်ကယ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်သည်။
အထက် menu ကို tab ကိုတစျဆငျ့ "Settings" ကို နှင့် '' တိုးချဲ့ "ခေါ်ဆိုမှု"။ ပြောပြရန်အကူးအပြောင်းလိုအပ်စဉ်အတွင်းadmin ရဲ့အဆိုပါ user name နဲ့ password ကိုအဖြစ်။
စာမျက်နှာပေါ်တွင် "မိုဘိုင်း Connect ကို" သင်ပါ Roaming ဝန်ဆောင်မှုကို activate လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ကို Select လုပ်ပါ "ကိုယ်ရေးဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု" နှင့်သတ်မှတ်ထားသောအဆက်အသွယ်ပေးအပ်သည့် parameters တွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ပါတယ်။ ကို click ရန်သေချာစေပါ "နယူးကိုယ်ရေးဖိုင်"settings ကိုကယ်ဖို့။
ပရိုဖိုင်အမည် - "Tele2";
username နှင့် password - "WAP";
ထဲမှာ "ကွန်ယက်က Settings" အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းနယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ပါ:
အဆိုပါဦးစားပေး mode ကို - "သာ LTE ကို";
LTE ကိုနေကြပါတယ် - "အားလုံးထောက်ခံ";
Network ကိုရှာရန် Mode ကို - "အော်တို".
စာနယ်ဇင်းများ "Apply"အသစ်က settings ကိုကယ်ဖို့။
မှတ်ချက်: သင့်လျော်သောအတှေ့အကွုံနှင့်အတူ, သငျသညျအစလုံခြုံရေး settings ကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "စနစ်" နှင့်ကို select "ပြန်လည်စတင်ပါ"။ သက်ဆိုင်ရာ button ကိုနှိပ်ခြင်း, Modem ကို restart ချလိုက်ပါ။
အဆိုပါ modem ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးနောက်ဖြင့်အောင်မြင်စွာအင်တာနက်ချိတ်ဆက်, ဝင်းထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သတ်မှတ်ချက်နှင့်စွမ်းရည်များပေါ် မူတည်. ယင်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများကွဲပြားစေခြင်းငှါပြ။
Option ကို 2: Tele2 မိုဘိုင်း Partner
Tele2 မိုဘိုင်း Partner Program ကို 3G-Modem များအတွက်သီးသန့်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်အဖြစ်ယနေ့အထိ, ဒီ option ကိုလျော့နည်းသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေသော်လည်း, software ကိုသုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်နှင့်သင်ကွဲပြားခြားနားသော network တစ်ခု setting များကိုတစ်ဦးကြီးများအရေအတွက်ကတည်းဖြတ်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။
အဆိုပါ Tele2 မိုဘိုင်း Partner ကို install နှင့်အပြေးပြီးနောက်အထက် pane ထဲကပေါ်စာရင်းတွင်တိုးချဲ့ "Tools" နှင့်ကို select "Options ကို".
tab ကို "အထွေထွေ" သငျသညျအခါ operating system ကိုအဆိုပါအစီအစဉ်၏အပြုအမူကိုထိန်းချုပ်နှင့် Modem ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ခွင့်ပြုတည်ရှိသောရွေးချယ်စရာ:
"OS ကိုဖွင့်ချိန်မှာစတင်ရန်" - အဆိုပါ software ကိုစနစ်နှင့်အတူပြေးကြလိမ့်မည်
"ဖွင့်ချိန်မှာပြတင်းပေါက် Minimize" - အစီအစဉ်ကို startup မှာ system ကိုဗန်းမှလျော့ချလိမ့်မည်။
လာမယ့်အပိုင်းမှာတော့ "အော်တို connection ကိုရှေးခယျြစရာ" သင်တစ်ဦးကို tick သတ်မှတ်နိုင်သည် "startup အပေါ် Dialup"။ ဒါက modem တွေ့ရှိသောအခါအလိုအလျှောက်အင်တာနက်ကိုချိတ်ဆက်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
စာမျက်နှာ "စာသားမက်ဆေ့ခ်ျကို" သတိပေးချက်များနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျများတင်ထားရန်ရည်ရွယ်သိမ်းဆည်းထားသည်။ ဒါဟာလာမယ့်တစ်ဦးအမှတ်အသားတင်ထားရန်အကြံပြုသည် "ဒေသဆိုင်ရာအတွက် Save"အခြားကဏ္ဍများကိုသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာပြောင်းလဲပစ်ရန်ခွင့်ပြုထားချိန်တွင်။
တစ်ဦး tab ကိုမှ switching အားဖြင့် "ကိုယ်ရေးဖိုင်စီမံခန့်ခွဲမှု"အဆိုပါစာရင်းထဲတွင် "ကိုယ်ရေးဖိုင်အမည်" တက်ကြွစွာကွန်ယက်ကိုပရိုဖိုင်းကို adjust ။ သစ်တစ်ခုစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဖန်တီးရန်ကလစ်နှိပ်ပါ "နယူး".
ထိုအခါ mode ကို select လုပ်ပါ "တည်ငြိမ်သော" အတွက် "APN ကို"။ ပွင့်လင်းလယ်ပြင်တွင်, ၏ချွင်းချက်နှင့်အတူ "User name ကို" နှင့် "Password ကို"အောက်ပါ Specify:
access ကို - "*99#".
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အဆင့်မြင့်"သင်တို့သည်အပိုဆောင်း setting များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ပုံရိပ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်း default အနေနဲ့, ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ပြောင်းလဲသွားတယ်ရပါမည်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသွားချိန်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့် setting များကယ်တင် "အိုကေ"။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်သင့်လျော်သောပြတင်းပေါက်မှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်ရပါမည်။
သငျသညျကိုအင်တာနက်ချိတ်ဆက်မတိုင်မီအသစ်တစ်ခုကိုပရိုဖိုင်းကိုဖန်တီးခဲ့လျှင်, ကွန်ယက်၏စာရင်းထဲကရှေးခယျြ "ကိုယ်ရေးဖိုင်အမည်".
ကျနော်တို့တရားဝင်ပရိုဂရမ်မှတဆင့် USB-modem configuration ကို Tele2 မိုဘိုင်းအဖော်နှင့်တကွသင်ကူညီနိုငျမျှော်လင့်ပါတယ်။
နှစ်ဦးစလုံးကိစ္စများတွင်မှန်ကန်သော setting များကိုပြစံအကြံပေးချက်များနဲ့ settings တွေကိုပြန်ညှိမှုစွမ်းရည်များ၏ကုန်ကျစရိတ်မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျအမွဲအပိုင်းကိုသုံးနိုင်သည် "အကူအညီ" သို့မဟုတ်ဤဆောင်းပါးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမှတ်ချက်များအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။